Shirkadda İzmir Karabağlar Metro 6 Shirkadda Ayaa Loogu Talo Galay Ugaarsiga Injineerka | RayHaber | raillynews
[24 / 01 / 2020] TCDD dib ugama laabato tigidhada tigidhada billaha ee YHT	06 Ankara
HomeTURKEYTurkish Aegean35 IzmirShirkadda 6 ee ku tartamaysa Qandaraaska Injineerka ee İzmir Karabağlar Metro
04 / 12 / 2019 35 Izmir, BULSHADA BULSHADA, Xaraashyada, tareenka, Turkish Aegean, GUUD, KENTİÇİ Systems Rail, Headline, Metro, TURKEY
shirkad ayaa u tartamaysay qandaraaska qaybta hoose ee Karabaglar
Shirkadda 6 ee ku tartamaysa Qandaraaska Injineerka ee İzmir Karabağlar Metro; ; Qandaraaska Shirkadda Karabağlar Metro, shirkadda 6 waxay soo bandhigtay qiimo. Qandaraaska ayaa la dhammayn doonaa maalmaha soo socda.
Marxaladda saddexaad ayaa laga gaadhay hindisada mashruuca mitirka Karabağlar. Maanta, baqshada sicirka ee ay bixiso shirkadda 6 waxaa laga furay Golaha Isutagga Dawlada Hoose ee Izmir. Go'aanka qandaraaska oo si toos ah loogu daabacay websaydhka Degmooyinka Izmir Metropolitan waxaa la go'aamin doonaa ka dib qiimeynta guddiga. Marxaladi ugu horreysay ee hindisada waxaa la qabtay bishii Agoosto ee la soo dhaafay.
Hindisooyinku waa sida soo socota:
RPA SRL 13 milyan 700 kun TL,
Metro Istanbul Inc. 13 milyan 855 kun 200 TL
Geoconsult ZT GmbH - TEKFEN Engineering Co. 15 milyan 600 kun TL
Yüksel Proje International Inc. - Arup Engineering iyo Consulting Ltd. STI. 16 milyan 900 kun TL
Mashruuca Wada-tashiga Injineerka Prota 21 milyan 500 kun TL
Su-Yapı Injineerka iyo Adeegyada La-tashiga Inc. 37 milyan 948 kun 800 TL
Izmir wuxuu noqon doonaa safka ugu dheer ee metrooga
Mashruuca ayaa ujeedadiisu tahay in xal loogu helo dhibaatada gaadiidka ee degmada Karabağlar, halkaas oo dadku ku badan yihiin magaalada. Khadkan laga dhisi doono inta udhaxeysa Halkapınar iyo Adnan Menderes Airport wuxuu raaci doonaa wadada Gaziemir, Eskiizmir, Eşrefpaşa, Çankaya, Basmane, Yenişehir iyo Halkapınar siday u kala horreeyaan. Mashiinka 28 kiiloomitir wuxuu noqon doonaa khadka ugu dheer ee magaalada, iyo sidoo kale isku xirka meelaha cufnaanta badan leh, iyo sidoo kale xarumo ganacsi oo muhiim ah sida Cistern, ESBAS, Fair Izmir, Kemeralti iyo Suuqa Cunnada.
Mashruuca ugu dambeeya ayaa lagu dhammeyn doonaa 2020. Dhameystirka arjiga iyo hanaanka ansixinta, qandaraaska dhismaha khadka ayaa la bilaabi doonaa. Lacala hadii dib u dhac uusan ku imaan howlaha howsha ansixinta, dhismaha Wadada Halkapınar-Karabağlar waxaa la filayaa inuu biloowdo labo sano kadib.
Dawlada Hoose ee Magaalada polzmir waxay ku dari doontaa Karabağlar iskuxirka gaadiidka xadiidka. Mashruuc iyo hindise-dhismeedyo loogu tala galay qadka metro Halkapınar-Karabağlar ayaa la bilaabay.
Dawlada Hoose ee Magaalada polzmir waxay qaadaysaa talaabooyin cusub oo lagu horumarinayo khadka tareenka 179 kiiloomitir kiiloo mitir. İzmir Magaalo-weynaha Magaalo-xeebeedka iyo Qaybta Maal-galinta Nidaamka Tareenka, waxay u adeegsaneysaa mashruuca khadka tareenka ee halkanpınar-Karabağlar. Hindisada ayaa dhacday oo la yimid hindisooyin. Haddii aysan jirin wax diidmo ah muddada sharciga, heshiiska waxaa loo qorsheeyay in lala saxiixdo shirkadda guuleysata bisha Diseembar 2019.
Dhismaha ayaa la rajaynayaa inuu bilaabmo labo sano gudahood
Mashruuca ugu dambeeya waxaa dhameystiri doona 2020. Intaa ka dib, codsiyada "oggolaanshaha" waxaa marka hore loo sameyn doonaa Agaasimaha Guud ee Maalgashiga Kaabayaasha ee hoos imanaya Wasaaradda Gaadiidka iyo Kaabayaasha kadibna Madaxtooyada Istiraatiijiyadda iyo Miisaaniyadda. Muddadan ayaa la filayaa inay qaadato laba sano. Qandaraaska dhismaha iyo howlaha dhismaha waxay ku bilaaban doonaan ku darista mashruuca barnaamijka maalgashiga. Xariiq kiiloo mitir 28 ah oo dhulka hoostiisa ah ayaa laga dhisi doonaa dhulka hoostiisa. Haddii dib u dhac uusan ku imaanin howsha ansaxinta, dhismaha Wadada Halkapınar-Karabağlar waxaa la rajeynayaa inuu bilowdo labo sano gudahood.
Duqa Magaalada İzmir Metropolitan Tunç Soyer wuxuu sheegay in wadada tareenka ee İzmir Main Transportation Master Plan laga dhisi doono wadada Halkapınar Konak Bozyaka Eskiizmir Street-Gaziemir-Yeni Fair Ground-Adnan Menderes Airport. Soyer wuxuu ku nuuxnuuxsaday in ku dhawaad ​​16 kun oo mitir oo qodista ah la sameyn doono kahor dhismaha. Tirada iyo goobaha saldhigyada ayaan wali caddeyn. Dhammaan waxaa go'aan laga gaari doonaa inta lagu gudajiro marxaladda mashruuca, marka la fiiriyo tirakoobka tirakoobka iyo sahaminta lagu sameeyo muwaadiniintayada. Marka lagu daro mashruucyada tareenka dhulka hoostiisa mara ee Buca ee ku jira hawsha qandaraaska, Narlıdere wuxuu sidoo kale ku daray khadadka mitirka Karabağlar ajendahayaga. Dhamaan mashruucyadan, waxaan uga tagi doonnaa marxalad aad u muhiim ah sida aan ugu duubnay İzmir shabagyada birta ah ”.
Shirkadda 5 waxay ku tartamaysay mashruuca Buca Metro
Adeegyada La-Talinta iyo Injineerinka ee Mashruuca Mashruuca Nidaamka Raadinta Magaalada Istanbul ee Istanbul…
İstanbul BB Üsküdar - Ümraniye - Çekmeköy Project Subway İnşaat
Istanbul BB Kartal - Kaynarca Metro Dhismaha iyo shaqooyinka elektaroonigga ah…
Ankara-Izmir waa mid ka mid ah heshiisyada ugu weyn sameeyo by Jamhuuriyadda Turkiga ...
Dhaliyarada dhalinta yar ayaa ku tartamaya Izmir
Ardayda Posoflu waxay Kulan La Kulmeen Wakhtiga Ugu Sarreeya Sarikamış
Burco waxay la kulantay walaac
3. Tirada Shirkadaha Lagu Kala Saarayo Goolka Jeexitaanka ee 3
Enderzmir Karabağlar Qandaraaska Injineer Subway
Qandaraaska Wadada Wadada Karabağlar
Qandaraaska Injineer Subway ee Karabağlar
Mashruuca Mashruuca Karabağlar Metro
Guddida Qaadashada Joogtada ee Ku-meelgaadhka ah ee Samsun Sivas ayaa gaadhay Samsun
Thales wuxuu ku guuleystey Tender Galbeedka Subway ee Australia